Shaxda Fashilka-Waa Kuwan 11-Kii Ciyaartoy Ee Xili Ciyaareedkan Ugu Liitay Horyaalka Premier league Iyo Magacyada Waa Wayn Ee Ku Jira. - Gool24.Net
Shaxda Fashilka-Waa Kuwan 11-Kii Ciyaartoy Ee Xili Ciyaareedkan Ugu Liitay Horyaalka Premier league Iyo Magacyada Waa Wayn Ee Ku Jira.
Wali waxaa inoo socota qiimayntii xili ciyaareedka soo xidhmay ee Premier league oo haddaba xogta dhinac laga eegayo waxaana muddo la soo saari doonaa qiimayno badan oo kala duwan oo ciyaartoyda iyo kooxaha lagu samayn doono.
Waxaanu qiimayntan idiinku haynaa shaxda kooxda fashilka ee 11 kii xidig ee xili ciyaareedkan ugu liitay horyaalka Premier league kadib markii ay saamayn yeelan waayeen ama ay qaladaad waa wayn sameeyeen.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa kooxaha ay ka tirsan yihiin 11 ka ciyaartoy ee ku soo baxay shaxda fashilka ee xili ciyaareedka Premeir League ee soo xidhmay.
Goolhayaha: Roberto-West Ham- Waxa uu noqday goolhayihii taariikhda Premier leauge ee abid ugu liitay.
Saddexda Difaaca Ah
David Luiz- Arsenal- Waxa uu noqday difaacii abid ugu horeeyay ee rekoodhayaasha ugu badan oo 5 ah lagu dhigay premeir league.
Adrian Mariappa- Watford- Waxaa loo doortay difaacii xili ciyaareedkan ugu liitay horyaalka oo dhan.
Christoph Zimmermann- Norwich City- Waxa uu ka mid ahaa difaacii Norwich City oo laga soo dhaliyay 75 gool oo Premier league ah.
Shanta Khadka Dhexe
Josip Drmic-Norwich City
Danny Drinkwater-Aston Villa
Jesse Lingard- Man United- Waxa uu soo qaatay xili ciyaareed xataa la ilaaway in la sii wado maadiisii baraha bulshada waxa uu ku soo fashilmay in uu hal gool dhaliyo ama caawiye ka noqdo ilaa intii la soo gaadhay daqiiqadii 98 aad ee ilbidhiqsiyadii xili ciyaareedka ugu danbeeyay oo uu goolkiisii ugu horeeyay ee xili ciyaareedka uu PL ka dhaliyay.
Marco Stiepermann- Norwich City
Joelinton- Newcastle United- Waxa uu Newcastle ugu soo biiray 40 milyan laakiin waxa uu soo dhaliyay 2 gool oo kaliya waana sababta uu u hogaaminayo shaxda fashilka Premeir League.
Andre Gray-Watford- Waxa uu ka mid ahaa sababihii fashilka u keenay kooxda heerka labaad udhacday ee Watford waana ciyartoyga ugu qiimaynta liita dhamaan xidigihii Premier league ee shan kulan ama ka badan soo ciyaaray xili ciyaareedkan.
jese lingard khalad.ayay.ugu.so daren.kuwa wax.shandeya